Nkwado ndabere na mpaghara weghachite iTunes Library
Mbụ niile, software nke TunesGo na PC gị na kwesịrị ka a meghere site abụọ na ịpị ya akara ngosi. A n'ụlọ ákwà ngebichi nke software dị ka onye nyere n'okpuru ga-apụta.
Nzọụkwụ 2. Pịa iTunes Library
Ugbu a na n'aka-ekpe n'akụkụ menu nke TunesGo peeji, pịa nhọrọ nke iTunes Library. (Nseta ihuenyo egosi red n'ọkpụite igbe).
Nzọụkwụ 3. họrọ "Jikwaa" - "ndabere / Weghachi" ọrụ
A ndepụta nhọrọ ga-apụta n'ihu gị site na nke mkpa ka ị họrọ mbụ nhọrọ nke Jikwaa. Ugbu a n'okpuru Jikwaa, pịa nhọrọ nke "ndabere / Weghachi". (Nseta ihuenyo egosi nhọrọ na akara red)
Nzọụkwụ 4. click "ndabere" button
A na peeji nke na nhọrọ nke na nkwado ma weghachite ga-apụta site na nke mkpa ka ị họrọ nkwado ndabere na mpaghara nhọrọ.
Nzọụkwụ 5. họrọ nkwado ndabere na mpaghara ụzọ
Ugbu a nkwado ndabere na mpaghara ụzọ na ị chọrọ kwesịrị ka a họrọ. (Nseta ihuenyo-egosi "E: \_ _ 1_698_1_ TunesGo \_ ndabere" dị ka ụzọ na-acha uhie uhie akara igbe).
Ozugbo gị iTunes Library bụ kwadoo a ozi a ga-emere. (Nseta ihuenyo egosi ngụkọta nke 78 faịlụ)
Nzọụkwụ 6. click "Weghachi" button- họrọ ndabere faịlụ ma weghachi, mgbe ahụ, Malitegharịa ekwentị TunesGo
Ugbu a ị chọrọ iji weghachi faịlụ na n'ihi na nke a dị mkpa ka ị họrọ ndabere faịlụ. (Nseta ihuenyo egosi 78 faịlụ nke na-ahọrọ na-e nkwado ndabere nke). Pịa na nhọrọ nke "Weghachi" ugbu na njedebe nke na peeji nke. E nwere otu nhọrọ na-arịọ gị bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ dum iTunes n'ọbá akwụkwọ tupu Iweghachi si ndabere. (Nseta ihuenyo na-egosi na nhọrọ dị ka kpacharaghị)
Ọzọ a peeji ga-apụta na ga-ajụ gị ma ọ bụrụ na ị bụ n'aka iji weghachi n'ọbá akwụkwọ. Pịa na nhọrọ nke "Weghachi" na ala nke na peeji.
Mgbe faịlụ na-ọma weghachiri eweghachi a ekele ozi ga-apụta na ga-ajụ gị ka ị na Malitegharịa ekwentị gị TunesGo. Pịa na nhọrọ nke "Malitegharịa ekwentị TunesGo" na ala nke na peeji.
Ọzọ: Site YouTube / nrụọrụ ka iTunes